Imfundo yomculo yezingane zasesikoleni esiphakeme ibaluleke kakhulu ekuthuthukiseni ukuxhumana okusha ebuchosheni. Ukuthola okufundwayo, okwenziwa ngaphansi kobuholi bukaPilar Dies-Suarez, kuzomenyezelwa emhlanganweni waminyaka yonke wama-radiologists eChicago. Ososayensi bakholelwa ukuthi ukuthuthukiswa komculo kwabasenkulisa kungavimbela izifo ezinjenge-autism nokuhluleka kokunakekelwa kokugula kokugula.
Ithonya lomculo libanzi kunalokho okucatshangwa ngaphambili
Udaba lwethonya lemfundo yomculo ezinganeni liye lafundiswa iminyaka eminingana. Esikhathini esidlule, isayensi seyisithole isiqinisekiso sokuthi ukudlala ipiyano, i-violin kanye nezinye izinsimbi zomculo kusiza izingane zifunde kangcono, zigcine ukuhlushwa nokukhumbula. Futhi manje sinesinye isiqinisekiso samakhono angenamkhawulo wezobuciko zomculo. Ukudlala kumadivayisi, izingane ezinenkinga ethile yengqondo, zibonisa ukuthuthukiswa okuphawulekayo esimweni. Ithonya lomculo ebuchosheni bezingane selinqume ukusebenzisa ukuhlolwa okwenziwe nezingane ezineminyaka engu-5-6.
Iqembu lokuhlola lalingabafundi abangu-23 basenkulisa
Ithimba likaDkt. Pilar Dies-Suarez ligxile eqenjini labangama-23 esikoleni. Ngesikhathi sokuhlolwa, ubuchopho bomntwana ngamunye bukhishwe ngokusetshenziswa kwendlela yokucabanga yokumisa ukukhanya ngokusebenzisa i-sensor diffusion. Izivivinyo zaqhutshwa kabili: ngaphambi kokuqala koqeqesho lwezinyanga eziyisishiyagalolunye zokuqeqeshwa ngaphansi kohlelo lweBoomwhackers, futhi ngemuva kokuqedwa kwalo. Njengengxenye yamakilasi, izingane zifunde lo mdlalo kuma-tubes eplastiki ekhanyayo obude obuhlukene, okuthi, uma ushaywe, uveza umsindo womculo. Yilokho lapho igama lensimbi lingavumelani nethoni yomsindo.
Iziphi izingxenye zobuchopho ezigxilwe kuzo?
Abacwaningi bagxile emcimbini omhlophe, yingxenye yobuchopho lapho izintambo zomzimba zingcono kakhulu. Yile ndawo ebophezele ukuqhutshwa kwemigwaqo emikhulu yama-hemispheres. Izinqubo ze-cylindrical ze-cell nerve (axx) zixhuma ama-neuron ngendlela yokuthi izingxenye ezahlukene zobuchopho zingakwazi ukuxhumana. Ucwaningo lwangaphambilini aluhambisani nethonya lokuthuthukiswa komculo lubonise ukuthi izingane ezine-ADHD ne-autism zinomqondo omncane omhlophe kwezinye izindawo ze-cortex yangaphambili yobuchopho. Ngakho-ke, ngoba ukukhathazeka kwengqondo okukhonjisiwe kungahambisana nokulahlekelwa kokuxhumana phakathi kwe-neurons.
Ekupheleni kwezinyanga eziyisishiyagalolunye zohlelo lokuqeqesha abakwa-Boomwhackers kuzo zonke izingane ezingu-23 zanda inani lemicu emhlophe e-cortex yangaphambili. Lokhu kubonisa ukuthi umculo wenza ukuba kwakhiwe ama-axon amasha. Ngakho-ke, izingane ezibambe iqhaza ekuhlolweni zithuthukisa ukuxhumana phakathi kwezifunda ezahlukene zobuchopho.
Nakhu okushiwo umlobi wesifundo ukuthi, uDkt. Diez-Suarez: "Ingane ethola ukufakwa komculo othile ilayisha ubuchopho ngemisebenzi ehlukahlukene. Kufanele alalele, athuthukise iminwe yakhe, akwazi ukubona umculo, abe nomuzwa wokubunjwa komculo futhi ngesikhathi esifanayo ahlanganyele eqenjini lezenhlalakahle. Leli qoqo lonke lamakhono lishukumisa izingxenye ezahlukene zobuchopho futhi lixhuma bobabili ama-hemispheres. "
UPolina Smolova: amaqiniso athakazelisayo okuvela ekuphileni
Izinhlobo zomculo womculo. Izinhlobo zomculo we-instrument kanye nomculo
Isiqubu se-Vysotsky. Archives of Marina Vlady endalini
Umculo nomdanso waseBosanova - ingabe lokho kwenzeka?
Umuthi 'Zyrtec' lehla: yokusetshenziswa, amafomu wokukhishwa, izakhiwo
Toyota Highlander: Izibuyekezo
Indlela yokwenza indiza yephepha emaminithini amabili?
Amakhekhe Lazy nge onion neqanda: iresiphi ngesithombe
Cervicalgia Vertebrogenic: izimbangela, izimpawu kanye zokwelapha
Barış Arduch: Biography, umsebenzi, ama-movie, ukuphila umlingisi komuntu siqu
Subcomandante Marcos: Biography nesithombe
Igundane Pasyuk: incazelo, isithombe